Wilaayada Islaamiga ah ee Sh/ hoose oo deeq gaarsiiyey dad dhawaan ku guryo beeley dab ka kacey Tuulaada Damaay ee hoostagta degmada Baraawe. | Halganka Online
Wilaayada Islaamiga ah ee Sh/ hoose oo deeq gaarsiiyey dad dhawaan ku guryo beeley dab ka kacey Tuulaada Damaay ee hoostagta degmada Baraawe.
Wafdi ka socda wilaayada Islaamiga ah ee Shabeelaha hoose oo maanta gaarey tuulada damaay oo katirsan degmada Baraawe ayaa waxey deeq isugu jirta Raashiin iyo agab kale oo muhiim ah waxey gaarsiiyeen dadkii ku guryo beeley dabkii dhawaan ka kacey Tuulada damaay kaasi oo galaaftey in kabadan Sodon guri.
Wafdiga oo uu hor kacayey waaliga wilaayada islaamiga ah ee gobolka Shabeelaha hoose Sheekh Maxamed C/laahi Xiirey ayaa waxey ugu horeyn booqasho iyo kormeer ku tageen halkii uu dabka ka kacey iyagoona indhahooda kusoo rakey khasaarihii uu geystey dabka.
Intaas kadib waxaa goobta deeqda lagu qeybinayey ka Hadley waaliga wilaayada islaamiga ah ee Shabeelaha Hoose Sheekh Maxamed C/laahi Xiirey wuxuuna waaliga ka dalbadey dadkii ku guryo beeley dabka inay u hogaan samaan qadarka Allah islamrkaana ay ku sabraan musiibadii ku habsatey.
Deeqda la gaarsiiyey dadka ay guryahooda ku bas beeleen dabkii dhawaan ka kacey tuulada damaay waxaa ay isugu jirtey raashiinka quutul daruuriga ah ee la cuno,maro kaneecooyin iyo guud ahaan agabka laga maar maanka u ah guryaha sida Alaabta lagu karsado Cuntada iyo Saliyada lagu tukado iyo waliba bacaha roobka laga galo.
Seddex maal mood ka hor ayey ahey markii dab Xoogan oo baabi’iyey guryo badan uu ka kacey deegaanka damaay ee hoos taga degmada Baraawe ee gobolka Shabeelaha hoose kaasi oo sabab unoqdey inay bas beelaan Sodomeeyo guryo ah oo ku yaaley tuuladaas.
« Beesha Harti daarood oo Beyco la gashey Wilaayada islaamiga ah ee jubooyinka. Beesha degta degmada qansax dheere ee gobolka Baay oo hubkeeda ku wareejisey wilaayada Islaamiga ah ee Baay iyo Bakool. »